The killing of the popular Oromo musician, Hachalu Hundessa, exposed the deep-seated ethnic animosity in Ethiopia. – Kichuu
HomeNewsAfricaThe killing of the popular Oromo musician, Hachalu Hundessa, exposed the deep-seated ethnic animosity in Ethiopia.
But is there a solution? And why should you care about the events happening in Ethiopia? Georgie Ndirangu explains.
Siyaasa Iliyiitii ”beekaa”, Elite politics
Dur fi amma
Gidu-galeessatti, gareen xiqqiishu tokko bahe ”Gobanaan abbaa keenya” jedhe akkuma yeroo jaarraa 19ffaa sanatti Nafxanyaaf meeshaa ta’e Oromoo Tulamaa lafarraa duguuguf ka’e hojjataa jira. Maalif yoo jette isa gaaffate ‘siyaasan tapachaa jira’ siin jedhe. Akka isaatti warra Amaaraatti taphaachaa jira, itti fayyadamaa jira. Akka isaatti ‘siyaasa bo’iichaa’ keessaa bahaa jira. Harkaa homaa takka hin qabu garuu garaa bokooksee ‘anatu biyya bulchaa jira’ siin jedha. Nafxanyaan akka meeshatti isatti akka fayyadamaa jirtullee hin beeku. Doofaadha.
Gara dhihaan, sirna Gadaa balleesse ”mootii” ofitti moggaase nama garba jedhe miliyoonaan gurguraa bahe, achiin bodas harka isaa sirna nama nyaataa Menilikitti keennate ummatotta kan akka Kafaa lafarraa fixe. Har’as nama Abiy jedhamu Nafxanyaa jiraa safuu hin beekne seexana ta’e ‘ mucaa isiinif keennine’ jirra jedha, sirna Nafxanyaa tiikusf waliin hojjachuf fiiga. Iliyiitii bitamaa hamaadha.
Iliyiitiin Gujii jiru ammoo ofiifillee kallattiin Nafxanyaa hin tajaajilu, namoota sirna Nafxanyaa tajaajilan tajaajila. Namoota ”Oromoota” ofiin jedhani sirna Nafxanyaa eegaa jiran tajaajila. Kuni tajaajilaa sadarkaa lamaffaadha.
Dur iliyiitiin (qondaala) Gadaan bulla, nu hin balleesitan jedhe eeboo fi gaachanaan falmate du’e kan Arsi, Baalee, Haragee fi Gosoota Tulamaa tokko tokko. Kunis Harka Muraa fi Harma Muraa Anolee fi Calii Calanqoo, sanyii duguggaa ummata sanitti fide. Gara Qeellam, Leeqaa, Horroo, Guduruu fi kkf ammoo bara 1930ta keessa Biyya Gamtaa (Confederacy) Oromoo Dhihaa jedhani ijaaruf tattaafin godhame ture. Kanaaf seenaa biyya Oromoo ijaaru qabu. Iliyiitiin Boorana durirraa hanga har’a sirna gadaa keessa jira, yoo mootummaatti galellee ija dununfate Nafxanyaa hin tajaajilu.
Seenaa fi xuriini
Gantuu yeroo hundumaa.
Iliyiitii ”Oromoo” ofiin jedhe garuu kan Nafxanyaa tajaajilu balleessun kaayyoo ummata keenya hundaati.
Amboon akkanatti eegamaa jirti. Jarri immoo “biyyi nagaa dha” jetti. Hiikkaan “nagaa” kun isaan biraatti kana jechuu dha.
#BilisummaaOromoo #OromoProtests #FreeOromoPrisoners
Akka Ilmaan Sikkoo-Mandotitti Muraamtee Oromoo hunda birattis yaanni kanuma.
ARSII LIXAA DODOLAA!
MANGUDDOOTA DODOLAA GALATOOMAA!
Olmaan magalaa dodolaa kan hardhaa hunduu milkiin xumurame. Joolle tenya ta waregamtelle awwalataa olan awwaalcha irratti jarroliin teenya murtee ajaa’ibaa dabarsaa olan.innis amma booda kabine ta’e kan ummata keenya basaasu kan hiisisu kan ajjeesisu walin firummaa takka walin hin qabnu joollenis tarkaanfi barbaaddu isin irratti fudhachuu ni dandeetti. Amma booda qabsoon joolle tenyatti dhiifnu hin jiru wan goonu walumaan goona wan taanu walumaan taana jedhaati oolan.